သက်ဝေ: ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (၂)
တရုပ်လူမျိုးတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ဒီက ရုံးတွေမှာ နှစ်သစ်ကူး နေ့လည်စာ စားပွဲတွေ၊ ညစာစားတဲ့ ပွဲတွေနဲ့ စည်ကားနေတာ…။ ဒီလို အချိန်မှာ တရုပ်လူမျိုးတွေ များတဲ့ ရုံးတရုံးက နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ် ညစာသွားစားကြတယ်…။
အဲဒီလို သွားစားကြတဲ့ အခါမှာ သူတို့ရုံးကို မကြာခင်ကမှ အသစ်ရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ် လူမျိုး လူမျိုးခြားတယောက်လဲ အတူတူ ပါလာတယ်…။ တရုပ်တွေကလဲ နှစ်သစ်ကူးချိန်နဲ့ ကြုံကြိုက်နေချိန်မှာ ရောက်လာတဲ့ အဲဒီလူအသစ်ကို သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ လုပ်လေ့ လုပ်ထရှိတာတွေ၊ အထူးတလည် ပြင်ဆင် စားသောက်ကြတဲ့ အစားအသောက်တွေ စတာတွေကို မမောနိုင် မပန်းနိုင် ရှင်းလင်း ပြောပြကြတာပေါ့…။
ဒီလိုနဲ့ စားမယ့် ဆိုင်ကို ရောက်လာတယ်…။ စားစရာတွေ မှာကြတယ်…။ စားစရာတွေ ရောက်လာပြီး စ စားမယ်ကြံတော့ အားလုံး ဝိုင်ခွက်လေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ "ကမ်ပေ့" လုပ်ကြတာပေါ့…။ လူမျိုးခြားကလဲ တပြုံးပြုံးနဲ့ သူတို့ ပြောသမျှ၊ သူတို့ လုပ်သမျှကို သေသေချာချာ လေ့လာနေတာလေ…။ တရုပ်တွေကလဲ စားလိုက်ကြ… ပြီးရင် ခွက်တွေထဲ ထပ်ဖြည့်ကြပြီး အသံကျယ်ကြီးတွေနဲ့ ကမ်ပေ့ လုပ်လိုက်ကြနဲ့ပေါ့…။
သူတို့တွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ကမ်ပေ့ နေကြတယ် မသိ… နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီလူမျိုးခြားက စိတ်တိုတိုနဲ့ ခပ်ကျယ်ကျယ် ပြောလိုက်တယ်တဲ့…
Ok… Ok… Please stop it. I know, you can’t pay…
Never mind… I will pay for you…!!!
မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်၊ နားထဲမှာ ကြားယောင်ရင်း ရယ်မော ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ…။
*** ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (၁)
Vista February 24, 2010 at 1:24 PM
Nge Naing February 24, 2010 at 1:40 PM
ကမ်ပေ့ ကဘာလဲ မသိ။ Can't pay မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သိတယ်။ အဖြူကတော့ သူပိုက်ဆံအများကြီး ကုန်တော့မှာပဲလို့ တော်တော်စိတ်ညစ်နေမှာပဲ။
pandora February 24, 2010 at 1:54 PM
ရယ်သွားပါတယ် :D :D
ကမ်ပေ့ နဲ့ can’t pay အယ်လ်ပီစာသား ပဲ :P
ကမ်ပေ့ က အကုန်မော့ချ.. အကုန်သောက် လို့ ပြောတာ
khet myint myint February 24, 2010 at 2:09 PM
အကုန်မော့ချသွားတယ်၊ can pay နိုင်ပါတယ် :D
Moe Cho Thinn February 24, 2010 at 2:22 PM
ကိုယ့် ဘီလ်တွေ ရှင်းပေးမယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာသွားတယ်။ Happy Chinese New Year ပါပဲ.. :))
Hmoo February 24, 2010 at 3:20 PM
CAM PAY :)
Thant February 24, 2010 at 5:48 PM
ဟားဟားဟား......Never mind… I will pay for you…!!!.... ခွိ..ခွိ..
ရီ လဲ မရီ ရဘူး။
PAUK February 24, 2010 at 6:46 PM
sonata-cantata February 24, 2010 at 7:30 PM
မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ အော်တာရှိသေးတယ်နော် "ရန်းဆေး" ဆိုလား... "ကမ်ပေ့" လို့ပဲ အော်တာလား...
လင်းဒီပ February 24, 2010 at 8:33 PM
ကလူသစ် February 24, 2010 at 9:37 PM
((((((((( ဗြဲ ဟဲဟဲ ))))))))))))))))))
ချစ်ကြည်အေး February 24, 2010 at 9:41 PM
ဟီးအ ဟီးအ ဟီးအ....
သက်ဝေ February 24, 2010 at 9:44 PM
ရယ်သွား ပြုံးသွားကြသူများ ရော...
မရယ်သွားသောသူများပါ ကမ်ပေ့... ကမ်ပေ့... ဗျို့. . . . .း))
Bino February 24, 2010 at 11:07 PM
khin oo may February 25, 2010 at 6:29 AM
khin oo may February 25, 2010 at 6:30 AM
ဂျူနို February 25, 2010 at 3:34 PM
ကမ်ပေ့ မသက်ဝေ။ ယူပဲ ပေ့။
rose of sharon February 25, 2010 at 9:50 PM
အဟီးရီရတယ်.. တကယ်ဘဲ အဲလိုရည်ရွယ်ပြီးအော်လိုက်ကြတာလားမသိဘူးနော်...
Ko Boyz February 26, 2010 at 12:45 AM
ရယ်လဲ မရယ်ရဘူး။ နှစ်ကျပ်ခွဲတန်ကမှ ရယ်ရသေးတယ်။
ဒါနဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲတန်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်...။
ကိုလူထွေး February 27, 2010 at 2:59 AM
တစ္ဆေငပျင်း (မချစ်ကြည်စကား ယူသုံးသည်) မသက်ဝေ...
ရွှေပြည်သူ March 1, 2010 at 12:46 AM
ကမ်ပေ့နဲ့ Can't Pay ကို တွေးတွေးပြီး ရယ်ပါသွားတယ် အစ်မသက်ဝေ...း))
ပုံရိပ် / Pon Yate March 1, 2010 at 11:26 AM
အဲလို များများ ပြောပေးရမယ်။
တစ်ချို့ကျတော့လည်း “ကြီးစေ၊ ရှည်စေ”
(ဘုန်းကြီးပါစေ၊ အသက်ရှည်ပါစေ) ပေါ့
Ko Boyz March 3, 2010 at 11:19 PM
ဒီဘလော့ဂါ .. စာဖတ်သူကို မလေးစားဘူး။
ကော်မန့်ထဲမှာ မေးသွားတဲ့ မေးခွန်းကို တစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ မဖြေထားဘူး။
alex April 16, 2013 at 7:10 PM
LOL...i better use that method oftenly!
sometimes chinese words are funny...
onceaguy told me that "ငါနင့်ကိုအီုက်တယ်'
i was thinkin wht he meant...??
later ..my fri told me what it means.
that wasagreatjoy!